Xogta iyo xaqiiqooyinka Finalka Champions League ayay UEFA faah faahin badan ka bixisay taas oo taageerayaasha kubbada cagta xog badan siinaysa.
Waxaa soo dhawaanaya waqtigii la sugayay ee finalka UEFA Champions League kaas oo magaalada Madrid ku dhex mari doona kooxaha Premier League ee Liverpool iyo Tottenham.
Liverpool iyo Tottenham ayaa bilawday tababarada ay ugu diyaar garoobayaan kulankooda xili ciyaareedkan ugu wayn ee ay ugu guulaysan karaan koobka kooxaha Yurub ee UEFA Champions League.
Waa markii labaad oo kaliya ee ay laba kooxood oo Ingiriis ahi isku wajahayaan finalka UEFA Champions league iyada oo hore Man United iyo Chelsea ay magaalada Moscow ugu kulmeen sanadkii 2008 kii.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xaqiiqooyin iyo xog faah faahsan oo la xidhiidha finalka Champions League ee kooxaha Liverpool iyo Tottenham.
Xogta Liverpool Vs Tottenham Ee Finalka UEFA Champions League
Liverpool iyo Tottenham ayaa xili ciyaareedkan iskugu soo hadhay tartanka ugu xiisaha badan kubbada cagta aduunka ee UEFA Champions League, waxayna labada kooxood ku balansan yihiin garoonka Atletico Madrid ee Estadio Wanda Metropolitano.
Liverpool waxay doonaysaa in ay markii lixaad ku guulaysato koobka kooxaha Yurub ee Champions League iyada oo haddaba ah kooxda ugu guulaha badan England ee shan jeer koobkan haysata.
Laakiin Tottenham ayaa doonaysa in ay markii abid ugu horeeyay taariikhda kooxdeeda ay ku guulaysato koobka dhegaha wayn ee Champions League waxayna haystaan fursadii ugu horaysay ee ay kooban ugu guulaysan lahaayeen.
Xaqiiqooyinka Liverpool iyo Tottenham ee Ka Hor Finalka Champions League:
⇒ Tottenham ayaa noqotay kooxdii 40 aad ee soo gaadhay finalka Champions Leauge waana kooxdii ugu horaysay ee finalkan ku cusub tan iyo 2008 kii markaas oo ay Chelsea ahayd kooxdii ugu danbaysay ee finalka Champions leauge ku cusbayd.
⇒ Haddii ay Tottenham ku guulaysato Champions League waxay noqon doontaa kooxdii 23 aad ee koobka kooxaha Yurub ee UCL ku guulaysatay, waxayna sidoo kale noqon doontaa kooxdii ugu danbaysay ee cusub ee magaceeda koobkan lagu qoro wixii ka danbeeyay 212 kii oo ay Chelsea ahayd kooxdii cusbayd ee ugu danbaysay koobkan.
⇒ Liverpool ayaa markii 21 aad soo gaadhay finalka tartanka kooxaha Yurub, waana finalkii siddeedaad ee Champions League, waxayna saddex jeer Reds ku soo guulaystay UEFA Cup/UEFA Europa League (1973, 1976, 2001).
Waxa kale oo ay Reds guuldaro la kulmeen finalkii 2016 kii ee Europa league halka saddex jeer soo hanteen koobka UEFA Super Cupka oo ay ku guulaystay Reds sanadihii 1977, 2001 iyo 2005 balse waxay isla UEFA Super Cup guudaro la kluantay sanadihii 1978 kii iyo 1984 kii.
Liverpool ayaa sidoo kale guuldaro la ulantay finalkii European Cup Winners’ Cup ee sanadkii 1981 kii si la mid ah finalkii European/South American Cup ee sanadkii 1984 kii. Rekoodhka guud ee Liverpool ee tartamada Yurub ayaa ah 11 guulood iyo 9 guuldaro ee kulamadii finalada ahaa.
Riix 2,3,4, 5 si aad xogta iyo xaqiiqooyinka oo dhan u akhrisato